आजको राशिफल : मिति २०७५ साल माघ २६ गते चतुर्थी तिथि शनिबार, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
आजको राशिफल : मिति २०७५ साल माघ २६ गते चतुर्थी तिथि शनिबार
आज २०७५ साल माघ २६ गते, इश्वी सन् २०१९ फेब्रुवरी ९ तारिख। शकसंवत् १९४०। विरोधकृत् संवत्सर। उत्तरायण। शिशिर ऋतु। नेपाल संवत् ११३९ सिल्लाथ्व। माघ शुक्लपक्ष। चतुर्थी तिथि शनिबार ।
परिवारमा खुशी र शान्ती छाउनेछ । नोकरी गर्नेहरुका लागि आजको दिन राम्रो रहनेछ । स्वास्थ्यमा स्वासप्रश्वास सम्बन्धि समस्या देखिनेछ । व्यवसायमा कडा मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । कानुनी कामबाट आज टाढा रहनु नै उचित हुनेछ।
प्रिय व्यक्तिहरुसंग समय बित्नेछ । व्यवसायमा धैर्यता आवश्यक हुनेछ । प्रेमी प्रेमिकाबीच मतभेद उत्पन्न हुनेछ । अशुभ समाचारका कारण मन चिन्तित हुनेछ । स्वास्थ्यमा गडबड हुनेछ ।
उपहार प्राप्त हुनेछ । नयाँ रोजगारीको बाटो खुल्नेछ । रोकिएको विवाद या मुद्दा मामिलाको तपाईंको पक्षमा सुनवाई हुनेछ । सामाजिक या पारिवारिक जीवनमा निर्दोष हुँदा हुँदै पनि विभिन्न आरोप लाग्न सक्नेछन्।
समाजमा प्रतिष्ठा मिल्नेछ । विवाहको चर्चा चल्नेछ । बोली र व्यवहारमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने समय छ । बसाइसराइ सम्बन्धि प्रक्रियाको काम अल्झीइनेछ ।
आत्मविश्वासमा कमी आउनेछ । भावनात्मक पक्षसंग सम्बन्धित निर्णय लिनको लागि आजको दिन उचित छैन । साझेदारीमा गरिएको काम राम्रोसंग अगाडी बढ्नेछ । आज सकारात्मक सोंचमा केन्द्रित हुनु जरुरि छ ।
आजको दिन अत्यन्तै शुभ रहेको छ । हरेकजसो कार्यमा सफलता मिल्नेछ । परिवारमा खुशी छाउनेछ । अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ती छाउनेछ । सम्मान मिल्नेछ ।
परिवारसंग आफ्नो भावना र विचार प्रष्ट रुपमा राख्दै उनीहरुको सहयोग लिन सकिनेछ । यात्राको सम्भावना रहेको छ । बोली व्यवहारमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने समय छ । विद्यार्थीहरुका लागि आजको दिन राम्रो रहने छैन ।
नयाँ व्यापार तथा सम्झौता गर्नको लागि आजको दिन राम्रो रहेको छ । आर्थिक लाभ मिल्नेछ । महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी भइनेछ । समाजमा मान प्रतिष्ठा बढ्नेछ ।
आज गरिएको सम्झौताले भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिनेछ । परिवारमा शान्ती र खुशी छाउनेछ । आत्मा सन्तुष्टि बढ्नेछ । मिहिनेत अनुसारको सफलता मिल्नेछ ।
उच्च अध्ययनको लागि प्रयास गरेकाहरुले सफलता प्राप्त गर्नेछन् । व्यवसायमा आइरहेको समस्या समाधान हुनेछ । आर्थिक लाभ मिलेतापनि खर्च बढ्नेछ । शुभचिन्तकको सहयोग प्राप्त हुनेछ । रुघा खोकी तथा ज्वरोले सताउनेछ ।
साझेदारका कारण समस्या निम्तिन सक्नेछ । कामको सिलसिलामा गरिएको यात्राले सोंचे अनुसारको प्रतिफल दिनेछैन । नयाँ काम सुरु गर्नको लागि आजको दिन उचित रहनेछैन । सम्बन्धहरुमा समेत चिसोपन देखिनेछ।
कामको सिलसिलामा यात्रा गर्नुपर्ने समय छ । प्रतिष्ठित व्यक्तिको सहयोगले काम पूर्ण हुनेछ । मान प्रतिष्ठा मिल्नेछ । परिवारका सदस्यसंग मतभेद हुनसक्ने समय छ।